एक्लै नबस्नुस् समस्याले सताउला ? ५ समस्या यस्तो छ - News Bihani
बुधबार, कार्तिक ६, २०७६ Wednesday 23rd October 2019
एक्लै नबस्नुस् समस्याले सताउला ? ५ समस्या यस्तो छ
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, मंसिर २२, २०७४
मानिस एक सामाजिक प्राणी हो र उसलाई बाँच्न सामाजिक वातावरणको आवश्यकता पर्छ । अहिले संसारका लाखौँ मानिस एक्लोपनको सिकार भएका छन् । जसका कारण उनीहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ । जीवनमा प्रायः मानिसले घरिघरि एक्लोपन महसुस गर्नुपर्ने भए पनि निरन्तर एक्लै बस्नु भने स्वास्थ्यका लागि गम्भीर खतरा हो । एक्लोपनका कारण मानिसमा धेरै खालका समस्या देखिन्छन् ।
एक्लो बस्दा मानिसमा डिप्रेसनको खतरा मात्रै हुँदैन, पेनिक अट्याक पनि गराउँछ । पेनिक अट्याक भयो भने मानिसले धेरै महिनासम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । डर लाग्ने, मुटु कमजोर हुने, मर्छुजस्तो डर लाग्ने पेनिक अट्याकका लक्षण हुन् । यो समस्या भएकाहरू भिडभाडमा जान सक्दैनन् । हरर मुभी हेर्न सक्दैनन् । धेरै आवाज आउने ठाउँले असर गर्न सक्छ ।
जो मानिस एक्लै जीवन व्यतित गर्न खोज्छ, उसमा तनाव बढ्छ । ब्लडप्रेसर उच्च हुन्छ भने सुगर भएकाहरूको सुगर बढ्छ । यति मात्रै हैन, वेलावेलामा चिडचिड हुने, रिस उठ्दै जाने लक्षण पनि एक्लोपनका कारण हुन् ।
एक्लोपनका कारण मानिसमा मुटुसम्बन्धी समस्या देखिन थाल्छ । एक्लोपनले मुटुका धमनीलाई कठोर बनाउँछ । यसले गर्दा उच्च रक्तचाप, हृदयाघातलगायत समस्या देखिन थाल्छ ।
एक्लोपनका कारण डिप्रेसनको समस्या बढ्नुका साथै आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको अध्ययनले बताएको छ । एक्लै हुँदा बिस्तारै यसले मानसिक समस्या बढाउने गर्छ । हामी सामाजिक सम्बन्धबाट टाढिन पुग्छौँ, मानसिक र शारीरिक रोगबाट पीडित बन्छौँ ।
एक्लोपनका कारण मानिसको निद्रा खलबलिन सक्छ । मानिस एक्लै बस्न थाल्यो भने निद्रा कम पर्ने हुन्छ । निद्रामा भएको गडबडीका कारण मानिसमा विभिन्न समस्या देखिन थाल्छ ।
कसरी छुटकारा पाउने
एक्लो बस्नु स्वास्थ्यका लागि बेफाइदा छ । किन र के कारणले एक्लोपन बढिरहेको छ, त्यसको पहिचान गर्नुहोस् ।
एक्लोपनकै कारण तपाईंमा विभिन्न मानसिक एवं शारीरिक समस्या निम्तिएका हुन सक्छन् । एकपटक मनन गर्नुहोस् ।
साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने, विभिन्न रमाइला ठाउँ घुम्न निस्कने गर्नुहोस् । यसले एक्लोपनको महसुस कम हुँदै जान सक्छ ।
जतिसक्दो साथीभाइ र परिवारसँग सम्बन्ध बढाउनुहोस् । सम्बन्ध बढ्दै गयो भने एक्लोपनबाट छुटकारा पाउन सहज हुन्छ ।
तपाइको पार्टनरले यस्तो संकेत देखाउदै छन् ? सम्झनुहोस, पार्टनरले धोखा दिदै छ
यी ५ राशिका युवती, जस्ले प्रेममा कहिलै धोका दिंदैनन् !
मादकपदार्थ सेवनपछि अँग्रेजी फरर बोल्ने बारे यस्तो भन्छ अध्ययन !
रातो स्विम कस्टममा बेनिशाको यस्तो पोज ? हेर्नुहोस हट तस्विरहरु
अदालतमा महराको बयान : झुटो आरोपमा फसाउने षड्यन्त्र भो
हचुवामै १० हजार कर्मचारी थप्ने प्रपञ्च : राज्यकोषमा २ खर्ब बढीको व्ययभार पर्ने
सैन्य संरचनातर्फ विप्लव : प्रहरीमा पुग्यो राजनीतिक दस्तावेज
आज यी राशिको हुनेछ भाग्यदय, हेर्नुहोस !
यी ३ तस्बिर जति नै आर्कषक भए पनि घरमा कहिल्यै नल्याउनुस्!
सरकारले एकैसाथ ५२ हजार युवालाई रोजगारको अवसर दिंदै
जिग्री-पाँडेविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी,अब सक्किगोनीको के हुन्छ भविष्य ?
रोनाल्डो र मेस्सी इन्स्टाग्रामबाट कति कमाउँछन् ? यस्तो छ आश्चर्यजनक आम्दानी!
आलमलाई थप ५ दिन थुनामा राख्न अनुमति
सुचना विभाग दर्ता नम्बर : ६९३
भैरवी मिडिया प्रालि
सम्पादक विजय हमाल
सन्चालक गोकर्ण बराल
© 2013-2019 News Bihani All Right Reserved | Site by : SobizTrend Technology